Kheeyrka Ramadan – Stichting Somalische in Breda
Bisha Ramadaan waa bisha sagaalaad (9) ee sannadka Hijriga Islaamka. Waxayna ka mid tahay shanta tiir ee Islaamka tiirkeeda afaraad(4aad). Waa bishii Quraanka kariimka uu soo dagay. Alle kor ahaaye wuxuu Quraanka ku yiri Soonka ayaa la idin faray sidii ummadihii idinka horeeyey loo faray in ay soomaan in idinkana soontaan.
Xigasho: Jaamac Cali Shidane,
Haddii aad markaad akhrisay khalad fadlan nala soo socodsii, sidoo kale haddii su’aal(o) la xiriira soonka qabto noogu soo gudbi halkaan